Mai Chibwe VekwaZimuto: Mukadzi Asinganyorovi pakurhojewa.
Nyaya yokusanyorova inonetsa vakadzi vakawanda munyika dzese.Inokonzera kusada kuiswa nomurume nokuti zvinenge zvogwadza kana murume achipinza. Muviri wemunhukadzi wakagadzigwa zvokuti chitubu chinyorove kana angofunga nyayya yokurjojewa. Kunyorova uku kunoitika bhinzi isati yatombomira uye matinji asati atanga kuzvimbrira.
Zvinitika kuti iye muridzi kazhinji haatombozivi kuti ange atanga kunyorova. Muchitubu mune zvipoto zvekunyorovesa zvinogaroongorora kuti mukadzi uyu ari kufungei. Akangotanga kufunga nyaya dzinorerekera kurhoji, zvipoto izvi zvototanga kupfachura mvura kunyorovesa mukati mechitubu kutii kana fungwa idzi dzikazokonzera kuti mukadzi apinzwe chombo mukati munge makanyorova zvokuti haasvuuki uye murume haasvuukiwo. Pamwe munovatana zvine ganyabvu mukati kana zemo rakakwira zvokuti dai pasina kunyorova, dai hosipitari dzichigara dzagazara nevanhu vakuvadzana.
Zvinoitika kutii mukadzi anyorove mukati iye asingatombozivi uti anyorova iri nyayya yokuti kunyorova kwake kunoitika kakawanda pazuva. Varume vanomira chombo kakawanda pazuva, zvikuru kana avete. Isuwo tinonyonrova kakawanda pazuva zvikuru tivetewo. Kune vakadzi vakawanda vanotofamba vane zvimucheka zvinohi panty liner, zvavanoisa pamberi mukatime bhurugwa kudzivirira bhurugwa kuita machakwi. Pazuva unokwansa kuchinja zvimicheka izvi pese paunoenda kutoilet. Zvikuru vakadzi vechidiki vanoti akangoona murume akagwinya kana kuti akanaka kutarisa, kamwe kafungwa kadikidiki kobva kasvika kachiti murume uyu anofanira kuva anonaka. Kafungwa keruchiva aka ndiko kanokonzera kutanga kunyorova zemo risati ratombotanga.
Kunozoti wava panyaya yokuti unziva kuti pano nyaya inotosvika pakupinzwa chombo, murume aripo iwe uripo, mava kutaura nezvekuvatana, unotanga kuita zemo bhinzi yomuka, matinji ozvimbirira, chitubu chotanga kuchinyatsonyorova zvokuti unosinira tumvura tunonyovesa bhurugwa zvakawedzera, minyatso yomukawo, ganda romuviri wese rowedzera kudakupurudzigwa. Zemo kana rasvika pkadai, musvonga waro kuvata nmurume kana kuzvifadza wega kana zvisingaiti kuvata nomurume uyu. Pamwe unenge waitiiswa zemo
Nomurume arsiri wako usingadi kuti muvatane
Pamwemukomana wako asina kukuroora
Pamwe murume ndewako asi kondomu hamuna
Pamwe hamuna nguva asi zemo munaro.
Ngatibvumiranei kuti kunyorova kwemukadzi kunotanga nefungwa dzinoitwa naiye mukadzi wacho. Izvi hazvinei nefungwa dzemurume, kana zvito zvemurume. Murume akaita zvaaita mukadzi akasava nehanya nazvo anokwanisa kusanyorova, chero zviito izvozvo zvirizvo zvinosiitisa kuti afunge zvinonyorovesa.
Kusanyorova nokuda kwezera:
Kunozoti wava munhu mukuru wapfuura makore 40, kunyorova kunotanga kunonoka, zvikuru kana iwe nomurume wako musingavatani kakawanda pavhiki. Kana muchiwanza unokwanisa kuramba uchinyorova asi kunyorova kwacho kunokwansa kunonoka kutanga nokuti ruchiva gwava rushoma.
Pano ndoda kutaura nrenyaya yemukadzi achiri wechidiki asi achinonoka kana kutadza kunyorova. Pane nguva yokuti mukadzi anotadza kunyorova chero ane zemo. Izvi zvinokwanisa kuitika zvigokonzera kuti pakupinzwa paya mukadzi anogwadziwa zvokuti anototadza kupinzwa. Kana akapinzwa, murumewo anotanga kugwadziwa pavanotanga kuda kukoirana. Zvinokwanisa kupedzisira vanorega asi vese zemo vanaro uye vachitoda kuvatana.
Pane zvikonzero zvinofunigwa kuti zvinoitisa kusanyorova uku.
Kusafarira maitire emurume
Kusava nemaHORMONE akakwana
Kunge uchishandiisa zvinhu mukatii mechitubu
Kunge uchishandisa mushonga wechimwewo chigwere
Toti pakuvatana kwenyu murume pane zvaanoita zvausingafariri. Zvinokwanisika kuti unogara uchimuudza asi zvoita sokuti haatereri. Sokuti anongokuti kupinza nokudiridzira ipapo nguva isina kupera iwe wogumbuka nazvo. Fungwa yako inotanga kungofunga kuti kuvhurira murume makumbo hakubatsiri chinhu nokuti hazvinaki. Kukaita nguva zvakadaro fungwa iya inonyorovesa inotadza kuita hanya nazvo yovhara. Panhu potadza kunyorova chero murume akazodii.
Ndosaka ndichigarokurudzira mese kuti dzdzai kutaurana makasununguka panyaya idzi. Dzidzaizve kuti kana muchivatana moita muchitaura. Kana murume ari mukati iwe mukadzi uchihwa kunaka uchihwazve kuti muromo wako urri kududza kuti zviri kunaka, usakangamwa kupa murume maINSTRUCTIONS okuwedzera kunaka.
Uchida apinze chombo chese, simudzira chiuno umuudze kuti pinza yese.
Uchida aderedze sipidhi yekukoira, muudze kuti asamhanyamhanya nokuti zviri kunaka.
Uchida awedzere sipidhi muudze.
Uchida ambomira uture mafemo muudze asi wadaro usanyarara makatura mafemo kudaro.
Uri pasi pake ukahwa kuti haasi kusvitsa paunoda kubaiwa, muudze kuti ambomira unoda kufongora apinde zvakadzika.
Uchida akupe urume muudze
Mukuchemerera umomo taura zvinowedzera kunakigwa kwako.Zvinopa murume manyawi okuzviita.
Kuva munhu akasungunguka pakutaura nepamaitire chinhu chikuru chokuti mese mudzidze kuita. Hazvinetsi kudzidza. Tanga nokungotaura zvinhu zvidiki. Unokwanisa kutaura nechibhende
sokuti, “Nhasi wadipfidzisa.” Ipapo unoona murume onyemwerera nemanyawi. Chikasir kumukisa asati afunga zvokutaura, womudetemba mutupo wake. Paanozotaura uchaona kuti anenge akasununguka zvinovazvinokusunungurawokuwedzera zvokutaura. Ndizvo zvinoita muhwisisane nokugadzirsa zvisina kunyatsorurama.
Kungopopotera munhu asingatoziviwo zvokuita hakubatsiri chinhu. Vaviri batsiranai kugadzirisa chese chakaipa. Uchaona kuti chinotora nguva shoma kugadzirika.
Murume asingatori nguva kubatabatana nomukadzi wake nokumbopinzawo zvigumwe muchitubu achikwenyerera imomo achikisana nomukadzi achizevezera zvaanoda kuzoita mukadzi wake, murume ane hugino. Hino iwe kana uchida izvi, ukasataura, ukatanga kungofundumwara kana nguva yokunovata yosvika, unoti achaudzwa nani? Wana mashoko asingagumburi okumuudza nawo kuti imbodai ugodai ugodai nokuti zvinonaka.
Kusava nemaHORMONE akakwana.
Pane maHORMONE echikadzi anobatsira kunyorova kwechitubu. Kana ari mashoma, chitubu hachinyorvi uye kupinzwa chombo kunogwadza. Kana uri panyaya yyokuti uri kuttya kuiswa nokuti zvinogwadza pamwe chikonero maHORMONE ako. Kasira kunoonekwa uitwe test.
Toti wakambogwadziswa umwe musi,
Kanaa kuti wakambopiwa chigwere pakuiswa,
Kana kuti wakambobatwa chibaro,
Kana kuti murume wako ane rino zichombo rinotyisa zvokuti kungorifunga unotohwa kutya,
Kana kuti wakambopinzwa chimwe chinhu chisiri chombo zvikakudya moyo,
Kana kuti wakakura uchidzidziswa kuti kuiswa nomunhu asina kukuroora chinhu chisina unhu saka unoda kuiswa asi unoziva kuti zvakaipa nokuti uyu mukomana wako haasi murume.
Kana kuti unongova munu anotya kuiswa usingazivi chikonzero.
Zvinoitika kuti usanyorova chero wada kuiswa.
Mishonga pasina zvigwere
Isu vanhu vatema zvemishonga tinozvifarira zvokuti cheromunhu asingagwari anomwa mishonga uye kuisa mishonga panzvimvo dzomuviri dzisina kana dambudziko.
Kana uri munhu anoshandisa mishonga muchitubu, pane imwe mishonga inoitisa kuti utadze kunyorova. Mutemo wechitubu ndewekuti hapana chinhu chinoiswamo chisinei nemo. Usashandiisa maSPRAY api zvawo mukati. Kune vakadzi vanoisa munyu kana mafufu esipo mukati, kana umwe mishonga yochikaranga mukati kwahi zvinoita kuti varege nunyorova kuti murume agoshinywa chombo. Hakuna ugino hunopfuura ipapo nokuti uchasvika pakutadza kuvata nomurume wako mese muchir vechidiki wopedzisira wamuruza. Kana uchida kushinya murume, simbisa masuru yechitubu. Unozvikwanisa chero une machakwi akata sei.
Usaisa mishonga muchitubu kana dhokotera vasina kukuudza kut isa.
Dziwe nguva unogwarawonorapiwa wopiwa musonga wokumwa. Pane imwe mishonga inoitisa zvimwe zvinonzi SIDE EFFECTS kureva kuti norapa chigwere asi inokonzera zvimwe zvausingafungiri kuitika. Unokwanisa kuzotadza kunyrova zasi. Kana waziva kuti zvaitiswa nomushonga, mira chigwere chipere ugozotii paita nguva mzamazve kutanga kuvatana. Udza murapi wako kuti ndizvo zvaitika. Pamwe anokuchinjira mushonga. Zvigwere zvemazvano zvakaita saana iabetes, Hypertension, etc, mishonga yazvo inokanganisa nyaya dzokurhojana.
Pane chigwere chinohi mycoplasma genitalia chinoitiswa nekamwe kautachiona kasingaonnekwi nemaziso asi kanogara muchitubu nomumuromo. Kana umwe wenyu akava nako, anokwanisa kupa umwe. Mukadzi akakaita anokwanisa kukanganiswa zvakawanda ogwadziwa pakuiswa uyezve pamwe otadza kunyorova. Madokotera haakasiri kutsvaka kanhu aka saka ukasakumbira kuvhenekwa unokwanisa kuita nguva yakareba uchingochemachema ivo vachikuudza kuti hapana chakkaipa chavari kuona. Kumbira kutestwa uzive kuti hauna chiutachiona ichi. Kana wanzi enda unotestwa, endai mese nokuti murume wako anenge anachoo futi.
Todii kana mukadzi asinganyorovi?
Chokutannga musatukana nenyaya iyi. Fungai nezvokuita. Mukahwisisa kuti zvinoitika kuvakadzi vakawanda uye pamwe zvinogadzirika munotanga kuongorora zvakanaka. Mukatanga kupopotedzana munnonoka kugadzirisa.
Hwisisai kuti mukkadzi anofanisa kunyorova musati mapinzana chombo. Saka murume mirira mukadzi anyorove. Usajaira kuda kupinzwa chombo usina kunyorova nokuti zvinokuvadza maMEMBRANE anodzivirira zvigwere.
Wedzerai Nguva yokutamba
Vakadzi hatinyayi kufarira kuhi tine zemo pese pese saka vamwe vedu vanononoka kunyrova nokuti fungwa hadzisi pakuiswa. Wanai nguva yokumbotamba mese makamurira kuvatana. Murume ngaawanewo nguva yokuti chero makkamirira kudya paya akawana mukana wekupurudzirawo magaro emukadzi wake nokumuudza kuti akanaka, nezviwewo zvinofadza, mukadzi anonyorova chero asingazivi kuti atotanga kunyorova.
Cheromukana waawana ngaajaire kubatabata mukadzi nokumukudza nokumunemera. Pamunozoenda kunovata mukadzii anenge agara atova nefungwa yazvo saka haanonoki kunyorova asi imbtambaiwo muite zvinotaridza rudo. Tori nguva muchitamba murume achipota achipinza chigumwe mukati achikwizirira kuno kumadziro ekumusora kwakanangana nebhinzi kunova ndiko kune kanyama kakagwinyirira kanonaka kukwenyiwa. Muadzi anokasira kunyrova nazvo.
Mukadzi ngaaise BALANCE pazvokudya zvake. Wedzera hove, uye imbodyawo dzimwe mhodzi dzinonzi FLAX SEED inova ine rimwe zita rokuti LINSEED. Unokwanisa kutova nazvo mugadheni mako. Wedzera izvi muzvokudyazvako.
Usashandisa zvimwe zvimishonga kuzasi kwako chero zvodii.
Zvibvunze kuti atitude yako chaiyo panyaya yokuiswa iri papi. Kana muchibika mapoto kana kuti uchingovata nomurume waunoziva kuti haasi wako unokwanisa kunge zvichikudya moyo kusvika pakuti muviri wako unoita PROTEST worega kunyorovesa zasi . Gadzirisa nyaya dzako.
Kana wakambobvisa mimba, kana kuti wakambopiwa chigwere nomurume, zvinokwanisa kukutyisa kuiswa. Enda kuCounselling udzikamise hana panyaya iyoyo. Nyaya dzedu isu vakadzi dzakawanda uye dzinonetsa kuhwisiswa noumwe munhu asi ukawana munhu asiri wehama kana shamwari uye waunoziva kuti haakuzivi, wekutaurira nyaya yako achikwanisa kuihwisisa zvokukubatsira, unokwanisa kugadzikana hana zvokukwanisa kudzokera zvawanga uri kare.
Nyaya yokunyorova inokwanisa kukurambanisai pasina kupera gore. Varume vedu vechiZimba havakwansi kugana nomukadzi asingakwanisi kuiswa. Anokuhurira pasina kupera mwedzi chaiwo. Haahwisisi kuti chigwere chinoda karapiwa. Asi iye akagwara ndipo paanotowedzera kuchengera. Unohwa oti anoda tii pa 30 munites dzega dzega kuti usawana mukana wekunonyengwa. Kana kumagirosa hauendi.
Makamirira kudai shandisai mate chaiwo emumuromo. Mate emukadzi kana murume zvese zvinoita. Murume akaisa mate akawanda pamuromo wechitubu chomukadzi mukadzi akanyenamisa chitubu, mukadziwo oisa mate machombo chomurume, mozama kupinzana zvinoita nyore pane kupinzwa usina kunyorova. Pakukoira kwenyu musaita zvine ganyabvu nokuti mate akasiyana neoiri yemukadzi.
Munokwanisa kunotenga imwe inohi KY jelly yokuisa mukati memukadzi kuti munyorove asi vanoziva vanoti ukaishandisa nguva refu unoderedza kudzivirira zvigwere kwemukati mechitubu.
Shandisai makachenjera. Zivazve kuti ndiyo inoshandiswa neNGOCHANI saka paunonotenga ukaona vemuCHEMIST vachikutarisa zvisingaiti ziva kuti vakufungira kuti uri ngochani. Kana zvichikutyisa endai mese nomukadzi kana kuti mukadzi ndiye oenda.
Mukadzi ane zemo asi asingakwanisi kuvhurira chombo haasi mukazi wekupopotera. Mukadzi anotovawo neFRUSTRATION yakatopfuura yako iwe murume. At LEAST anokwanisa kukubatsira nemaoko, mazamu etc ukatokwanisa kuguta. Ko iye achaita sei kuti agute.
Chigwere chokusanyorova chakangofanana nechigwere kuvarume chokutadza kumira chombo. Musi waunotadza kumira chombo mukadzi wako akasakubatsira unowedzera kusamira nokuda kwekudyiwa moyo.
Iwewo mukadzi wako anoda rubetsero kwauri kana atadza kunyorova. Ukamubatsira ukamuratidza rudo, ukamukurudzira, munokwanisa kukasira kugadzirisa nyaya yenyu motozotangazve kuvatana zvakanaka. Ukatanga kumupopotera nokumutsamwira kuita sokuti anozviitisa, unotomuwedzera dambudziko. Anobva atofunga kuti uri kuhura.
kana watadza kupinza nokuda kwekusanyorova kwake, mupe chomboiye aone zvokuita nacho, anokwanisa kushandisa maoko, anokwanisa kukwiza chombone mazamu., anokwanisa kumwa chombo semhuruirikumwa mukaka wamai. iwewo ukambosvitsa rurimi pabhinzi yake ukaikwiza norurimi, anokwanisa kuzonyorova wopedzesira wapinza pasiina dambudziko.
Nyaya iyi ihuru saka musaiita seisina maturo. Kasirai kuigadzirisa. Hwisisa kuti unokwanisa kuita makore uchinyorova wongozoona umwe musi zvoramba kuitika, kopera mwedzi yakati kuuti uchinetseka nazvo zvozotanga futi kuita seisina kumbonetseka nazvo.
Posted by Mai E Chibwe at 03:44
Mazvita, ndaverenga ini dambudziko rangu riri pama hormones. Ndakaitwa ma tests ndikaonekwa kuti ndinogona ndisina balance izvi zvinondipa dambudziko zvakare rekuenda kumwedzi , ndinogona kupedza mwedzi mina ndisina kuenda . Hatisati tave kuda mwana asi ndinovimba vana chiremba vachatibatsira.
22 December 2015 at 23:22
Balance ye maHORMONES inokwanisa kugadzirika ne balanced Diet. Dai wambozama kudya zvakasiyanasiyana uye michero nokuita nyama shoma uye isina mafuta.
Pakuvatana enda undotenga inohi KY jelly yokuzvinorovesa nayo. kana musina mari shandisa mate chaiwo emumuromo asi moona kuti hamusi kukosora musi wacho.
Musashandisa mvura kana chimwe chinhu. Kukisana murume ari mukati makamirira kunyorova zvinoitira vamwe. Iyewo murume anobuda tuoiri tushomanana tunobatsirazve asi zvinoda kunyorova kwakawanda.
Ini ndine dambudziko mudzimai wangu haadi kuvata neni anotoda musi waane achinzwa kuda iye
2 February 2017 at 04:50